I-APE: Umbhali, Umshicileli, Usomabhizinisi | Martech Zone
I-APE: Umbhali, Umshicileli, Usomabhizinisi
NgoLwesithathu, Februwari 13, 2013 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ukulungiselela ingxoxo yethu noGuy Kawasaki, ngathenga ikhophi ye- I-APE: Umbhali, Umshicileli, Usomabhizinisi-Ungayishicilela Kanjani Incwadi.
Ngifunde iningi lezincwadi zikaGuy Kawasaki futhi bengingumlandeli isikhathi esithile (qiniseka ukuthi ungena kwinhlolokhono okokuqala lapho engithumela ku-Twitter… indaba emnandi!). Le ncwadi yehluke kakhulu, kepha… iyincwadi enemiyalelo yesinyathelo nesinyathelo yokuthi ungazishicilela kanjani nge-ebook yakho.
Ababhali uGuy Kawasaki noShawn Welch baqala I-APE: Umbhali, Umshicileli, Usomabhizinisi ngendaba eyiqiniso ngokukhungatheka kukaGuy ngokuthola ukuthi incwadi yakhe yokugcina isatshalaliswe ngekhompyutha ngokuthengwa ngobuningi enkampanini. Incwadi ibese ihamba kuzo zonke izinselelo zama-ebook - kusuka kumafomethi, kuya kumathuluzi, kuya ekusatshalalisweni kokumaketha. Kunzima kakhulu kunokuba ubungacabanga (kuze kube yile ncwadi!).
Incwadi ibhala imininingwane yazo zonke izindlela ezifakazelwe zokwakha i-ebook yakho, kuze kufike ezithombeni zesikrini zamathuluzi ozowasebenzisa, amasayithi okufanele uwasebenzise, ​​nezitolo ongazithengisa. Kwangimangaza ngempela yonke imininingwane. Ngumhlahlandlela wokufundisa wesinyathelo ngesinyathelo kunoma ngubani ongazishicilela.
Kwangihlaba umxhwele ukuthi ngithenge futhi ngasabalalisa amanye amakhophi ama-3… ku UJenn futhi Marty bobabili basebenzela izincwadi zabo kuze kufike kuNathan, umklami wethu, ozosiza ngomklamo wezithombe.
Kungani Ungashicilela Incwadi?
Siqale sahlabeka umxhwele ngamathuba okuzishicilela lapho sixoxa noJim Kukral. UJim usikhombisile ukuthi ijika lokufunwa kwama-ebook lalikhuphuka ngokushesha okukhulu kunokukhishwa kwangempela kwama-ebook. Lesi yisikhathi esimangalisayo sabantu noma izinkampani zokwakha ukwethembeka negunya ngokushicilela i-ebook.
Uma unokuthile okuphawulekayo ongakusho… leli yithuba lakho lokushicilela futhi wabelane ngalo!
Tags: i-apeumbhalie-ncwadii-ebookusomabhizinisiGuy Kawasakishicilelaumshicileliukuzishicilela
Imininingwane Emikhulu Yedatha evela kuMicrosoft
I-On-Page SEO Best Practices ngo-2013: 7 Imithetho Yomdlalo
Feb 14, 2013 ngo-10: 44 AM
Ingabe ungena ekubhalweni kwesipoki encwadini? Ngabe unohlelo lokuthi abantu abangenaso isikhathi (noma mhlawumbe ithalente) babhale?
Feb 14, 2013 ngo-3: 24 PM
Sawubona @ daveyoung: disqus, kunamathiphu okubhala encwadini. Ngicabanga ukuthi uGuy mhlawumbe ungowokuqala ukukutshela ukuthi umbhali osebenza naye uyisinyathelo esihle uma ungenaso isikhathi noma ithalente. Nganginombhali osebenza naye encwadini yami futhi wenza konke kwaba lula… ngokuyisisekelo lencwadi kwakuyimicabango yami kepha uChantelle wazihlela futhi wagcina iphrojekthi ibhekiwe.